प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछोड्ने अडानमा ओली, प्रचण्ड भन्छन् : ‘एउटा पद त छाड्नुस्’ « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७७, बिहीबार ०९:२१
काठमाडौं : नेकपा अध्यक्षद्वयबीच चार दिनयता जारी छलफल बुधबार आएर झनै बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अब बिहीबार छलफल हुन्छ/हुन्न भन्ने टुंगो पनि छैन। आइतबार आरोप/प्रत्यारोप चल्यो। सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र मंगलबार अध्यक्ष दाहालले आफ्ना कुरा खुलस्त राखे। सहमतिको उपाय खोज्न बुधबार साँझ दुई घण्टा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो।
त्यसपछि भने दुई नेताबीच चर्काचर्की परेको थियो। दुवै जना अडानमा टसमस नभएपछि प्रधानमन्त्रीले दाहालसँग भने, ‘तपाईंहरू स्थायी समितिमा बहुमत भएको मान्छे, बैठक राख्नुहोस्, म छोड्नेवाला छैन।’ दाहालले ओलीलाई भने, ‘तपाईंले के गर्न खोज्नुभएको ? मिल्ने कुनै बिन्दुमा लचक हुने कुरै गर्नुहुन्न ? पार्टी एकता गर्न मन छैन तपाईंलाई ? ’ ओलीले पनि दाहाललाई भने, ‘के गर्न खोजेको भन्ने त देखिहाल्नुभएको छ नि ! पार्टी एकता भए त हुन्छ नि तर हुँदैन भने के गर्ने ? ’
जवाफमा ओलीले भने, ‘दुईतिहाइ झन्डै जनमत भएको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती फाल्न खोजेपछि प्रदर्शन हुनु स्वाभाविक हो। प्रदर्शन हुन्छ, जनताले स्वाभाविक रूपमा जुलुस निकाल्छन्।’यसरी बुधबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो। १८ असारयता स्थायी समिति बैठक मिति तोक्दै शुक्रबार (असार २६ सम्म) सारेर दुई नेता सहमति खोज्न छलफलमा बसेका थिए। छलफलको वातावरण झनै बिग्रिएपछि बिहीबार थप छलफल हुने/नहुने टुंगो छैन। दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा (जुगल)ले नेताहरूका अडान यथावत् रहेको बताए। ‘बिहीबार छलफल हुने/नहुनेसम्म टुंगो लागेको छैन’, उनले भने। अन्नपूर्ण पोष्टमा रामकृष्ण अधिकारीले यो समाचार लेखेका छन् ।